AMakhosi kaZulu akhuza umuga abona nenhlekelele – Ubukhosi
Home/ UBukhosi BoHlanga/AMakhosi kaZulu akhuza umuga abona nenhlekelele
Ingxenye yaMakhosi emhlanganweni owawuseThekwini ngoMasingana
Izinsika zikaZulu zibukeka zikuqonda ubingozi besiphakamiso sokuguqula isimiso soBukhosi
Ngokwesimiso soBukhosi bukaZulu, amaKhosi ezizwe ayizinsika zeSihlalo. Yiwo angabavikeli beSihlalo selokhu kwathi nhlo. AMakhosi namuhla ami lapho kwakumi khona oyise endule. Kube ngalesi sizathu ngukamangazanga ukuzinikela kwawo manxa kuvela izindaba zokuthi kukhona abahlela ukuba kuguqulwe isimiso soBukhosi. Kusuka kwezwakala lomuga aMakhosi kwaZulu-Natal asebe nemihlangano eminingana edingida phakathi kokunye izindlela zokuphemeza lokhu kuhlaselwa ngabafo.
Umhalangano wokuqala ube ngoMasingana eThekwini nayilapho abetheleke ngomuningi bawo amaKhosi kanye namabamba bevela kuzo zonke izngxenye kweleNdlovukazi uMthaniya. Kulomhlangano kwavumelwana ukuthi isiphakamiso sokuguqula isimiso sikaZulu singasho inhlekelele namuhla naphakade. AMakhosi abuka lesi siphakamiso njengemizamo engcolileyo yokuqeda ngoBukhosi.
USihlalo weNdlu Yobuholi Bomdabu KwaZulu-Natal, INkosi yesizwe saseMaDungeni uPhathisizwe Chiliza uthe, “Lo mhlangano ubaluleke kakhulu kithi njengoZulu ngodaba olujule kakhulu oluthinta isizwe sonke. Uma ukhuluma ngodaba lomhlaba usuke uthinta izingxabo zethu uma uthi ufuna ukuthatha lamanenjana omhlaba osele ufana ngokugwaza ngomkhonto ekujuleni kwenhliziyo” kucacisa uMdunge. Kuwo lomhlangano uNdunankulu kaZulu, uMntwana wakwaPhindangene wethulela umhlangano umlando ngokubunjwa kwe-Ingonyama Trust nathe kazisoli ngokukwenza ngoba wabe ekwenzela ISILO nesizwe ukuze umhlaba kaZulu ungagcini usuphethwe nguHulumeni.
Emhlanganweni wangoMasingana zonke izikhulumi kanye naMakhosi bavumelana ukuthi okuphakanyiswayo ngesimiso sikaZulu ngamalumbo nokuthi abeze nezincomo bakhomba iSihlalo ngomunwe. AMakhosi abuye aqaphela ukuthi abahlanganise lo mbiko neziphakamiso abantu abangakaze babuthande uBukhosi kusuka ezinkulumweni zabo ezedlule. Igama likaDkt u-Aninka Claassens yilo ebelivela njengomuntu okube yiphutha ukuba kunikezwe yena umsebenzi wokwenza uncwaningo ngoba imizwa yakhe ngoBukhosi ne-Ingonyama Trust akayifihli. Khona lapho aMakhosi aphawulile ukuthi ucwaningo lolu okuthiwa lwenziwe bekunyanyalatwa nje “kufundunyezwa inhlamba”, ekade yayishiwo ngoBukhosi.
USomlando uSolwazi uJabulani Maphalala nowayenza isethulo wafanisa isiphakamiso sokubuka uZulu umhlaba njengempi ebhekiswe kulesi sizukulwane sanamuhla nokumele senze njengoba oyise benza endulo , siphakame sivikele ifagugu lesizwe.
Isinqumo esathathwe aMakhosi sithe: “Thina Makhosi aKwaZulu-Natal ebesihlangene lapha eNkosi Albert Luthuli ICC, eThekwini ngomhla zingama-24 kuya zingama-25 kuMasingana 2018, siphawula futhi sinquma ngale ndlela elandelayo: Sikulandele futhi sakuqonda okuqukethwe umbiko eSigungu Esisezingeni Eliphezulu ebesiholwa uMnu uMotlanthe, oke waba nguMengameli wezwe isikhathi esifushane nesekela likaMengameli.
Sikuqaphelile ukuthi ubufakazi lesi sigungu esithi buholele kulezi zincomo elizenzile buyincikinciki, abunasisindo buyathunaza futhi abethembekile. Kuyacaca futhi ukuthi labo abathintekayo ISILO aMakhosi, izizwe kanye neBhodi le-Ingonyama Trust abazange banikezwe ithuba lokuziphendulela.
Okubuye kuthunaze kakhulu ngalo mbiko ukuthi umbhali wawo uDkt u-Aninka Claassens isitha esidala soBukhosi kanye ne-Ingonyama Trust. Uma umuntu ebhekisisa lo mbiko umuntu kutholakala ukuthi imbiza endala kaDokotela Claassens amane wayifudumeza nje.
SingaMakhosi aKwaZulu-Natal sinqume kanje: Lezi zingxenye zombiko ezithinta ukuqedwa kwe-Ingonyama Trust ezisembikweni weSigungu Elisezingeni Eliphezulu lika Mhlonishwa uMnu uMotlanthe siyazichitha zonke njengento engenasisekelo futhi engafanele ukuhlonishwa.
Akuhlelwe umhlangano waMakhosi neSILO ukuze siyobikelwa ngakho konke osekwenzekile mayelana nalolu daba. Sicela ukuba kuhlelwe umhlangano nalesi Sigungu sizochaza ngalo mbiko waso kanye nenhloso yaso.
Izinqumo ezathathwa emhlanganweni weSILO naMakhosi mayelana nezindaba zesizwe eSishayamthetho esidala oLundi ngomhla zili-11 kuNhlangulana ngowe-2018
Siyaqhubeka ngohlelo lokuya ezinkantolo, lapho sifuna ukuphikisana nezinqumo kanye nemibiko ezama ukubulala Ingonyama Trust, nokuthatha umhlaba weSizwe samaZulu ophethwe uhlaka lwe-Ingonyama Trust. Uma sikwenza lokho sizobe siphonsa inselelo, siphonsela umqulu okhishwe iqoqo likaMnu uMotlanthe kanye nomthetho sivivinywa osephalamende kwigazette yowesi-07 kuNtulikazi wezi-2017.
Sizophonsa inselelo kwezinye izahluko noma iziqeshana zomthetho we-Ingonyama Trust la umhlaba ongaphansi kwe-Ingonyama Trust ongamalokishi wathathwa ngaphandle kwesinxephezelo, siphinde sifake inselelo kwezinye izahluko zomthetho zeKwaZulu-Natal Traditional Leadership Act No 5, ka 2005.
Sifisa inkantolo icacise ngaphandle kokungabaza amandla eSILO, ikakhulukazi ukuthi ubani onamandla okubeka iNkosi esihlalweni phakathi kweSILO noHulumeni.
AMakhosi azohola umkhankaso wokuxhumana neSizwe ekwaziseni eSizwe mayelana nesimo ekubhekenwe naso, ngokwazisa ukuthi lomhlaba we-Ingonyama Trust uyini, futhi okabani.
Kunesidingo esiphuthumayo sokucela egameni leSILO ukuthi uMengameli weZwe abonane neSILO siphelezelwa aMakhosi.
ISILO sibiza Imbizo ngomhla wesi-4 kuNtulikazi wezi-2018. AMakhosi azoqhubeka nokuxhumana nezizwe zawo nemiphakathi akhuthaze ukuthi izizwe zibekhona embizweni, imininingwane izolandela. ISILO sizothumela izigijimi kubo bonke abaHoli beNkolo noSomabhizinisi ukuqinisekisa ukuthi kubizwe Imbizo ngomhla wesi-4 kuNtulikazi wezi-2018.
Lolu daba lokubhekana ngeziqu zamehlo phakathi kukaZulu noHulumeni lobe seluxazululwe ngokuphelele mhla kutholwe into ebhalwe phansi ukuthi akusoze kuphindwe kudalwe amasu okuthatha umhlaba.
Kunesidingo sikakhukhulela ngoqo oholwa uNdunankulu kaZulu wabantu bonke abakhele izindawo zaMakhosi ukuba bahlangane, baveze ilaka labo maqondana nodaba loMhlaba ongaphansi kweSILO Samabandla lapho kobalula ukuba abantu bafike njengaseThekwini. Lokho kokwenziwa ngokubambisana phakathi kweNdlu Yesifundazwe yoBuholi Bendabuko kanye ne-Ingonyama Trust, imininingwane isiyolandela.
Kusenefindo ukusebenzisana koBukhosi noHulumeni